पोथी रिझाउन तोप चराको कसरत ! | Ratopati
पोथी रिझाउन तोप चराको कसरत !
personसुवास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ७, २०७६ chat_bubble_outline0
तोप चराले नलोभ्याउने कमै होलान् । विशेष गरेर यसको गुँड बनाउने सीपले सबैलाई आकर्षित गर्ने गर्छ ।
तोप तरालाई ‘कोटेरो’, ‘सुजेरो’, ‘बकेचो’ जस्ता नामले पनि चिन्छि ।
तोप चराको मुख्य आहार धान र गेडागुडी हो । त्यही भएर बालीनाली र पानी भएका पोखरीको छेउछाउमा यो बस्न रुचाउँछ ।
यी चरामा भालेहरूको टाउको र घाँटी वरिपरि पहेंलो हुन्छ । पोथी फुस्रा हुन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यका आएपछि यिनीहरूको भाले चराको पहिलो र प्रमुख काम भनेको गुँड बनाउने हो । हरियो घाँस जम्मा पारेर यिनीहरूले चुच्चोको सहाराले कलात्मक पाराले गुँड बनाउने गर्छन् । झट्ट हेर्दा गुँड मानिसले सिलाएर बनाएको जस्तै आकर्षक देखिन्छ । भालेले बनाएको गुँड नसकेसम्म पोथीले हेरिरहन्छ । गुँड मन परेन भने पोथी गुँडभित्रै पस्दैन । भालेले पुनः पोथीलाई मन पर्ने गुँड बनाउनुपर्छ । पोथीलाई खुसी बनाउनका लागि पनि भालेले राम्रो र कलात्मक पाराको गुँड बनाउने गर्छन् ।
हेर्नुहोस् चम्पादेवीमा देखिएका तोप चराहरु :